ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၅) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on January 13, 2014 at 11:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Complaining about another co-worker toaco-worker (လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကြောင်း မကျေမနပ်ပြောခြင်း)
ရုံးတစ်ရုံးဟာလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်လို့ လူမှုပြဿနာလေးများ အကြိတ်အခဲလေးများရှိ တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မကြေလည်တာလေးများ ရင်ဖွင့်ချင် တာလေးများရှိရင်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပြောနိုင်အောင် အောက်ကနမူနာဝါကျများကို လေ့လာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (တစ်ချို့ဝါကျများသည် စိတ်ထဲရှိသလိုပြောခြင်းဖြစ်သဖြင့် အရပ်သုံးဆန်ခြင်း၊ မယဉ်ကျေးခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။)
"Have you worked with Ko Latt yet? He can't do anything right."
"The problem with Min Min is that he doesn't know that he is an idiot."
"I remember helping Mg Mg out so much, and then he stabs my back."
ငါမောင်မောင့်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့ဖူးတာမမေ့သေးဘူး။ ပြီးတော့သူငါ့နောက်ကျော ကိုဓါးနဲ့ထိုးတယ်လေ။
သူ့အလုပ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်းကို သူ့အလုပ်တွေနည်းနည်းစီလိုက်လုပ်ခိုင်းပြီး နောက်တော့ သူ့အကုန်လုံးလုပ်တာလို့ပြောတယ်။
"If you have to work with Ko Latt, remember the things I told you."
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကပဲကန်းနေတာလား ငါကပဲ သည်းသည်းလှုပ်နေတာလားမသိဘူး။
kiss somebody’s ass / brown noseing သည် တစ်ချိန်လုံးအကောင်းချည်းပြောသည်၊ လူကြီးရှေ့အတွင်အလုပ်ကျိုးစားချင်ယောင်ဆောင်တတ်သည်။ လူကြီးသဘောကျ အောင်နေထိုင်ပြသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
"I can't believe this company is paying ks 25,0000amonth for this fool."
ကုမ္ပဏီကဒီအရူးကို တစ်လ နှစ်သိန်းခွဲပေးထားတာ ရုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး။
Complaining about the company (ကုမ္ပဏီအကြောင်း မကျေမနပ်ပြောခြင်း)
မိမိလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လို့ သဘောမတိုက်ဆိုင်တာ၊ မကျေနပ်တာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီအကြောင်းမကျေနပ်တာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ နံရံတိုင်းမှာ နားရှိတယ် walls have ears ဆိုတာလေးကို သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
"This isadead end job. I don't see much ofafuture here."
ဒီအလုပ်က လမ်းဆုံးအလုပ်ပဲ။ ဒီမှာအနာဂါတ်တက်လမ်းမမြင်ဘူး။
"I hate the redundancy. It's so boring."
"Work isn't exciting for me anymore. I am doing the same thing over and over again."
အလုပ်ကငါ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့ဘူး။ ဒါကြီးပဲ ထပ်ကာထပ်ကာလုပ်နေရတယ်။
"This company doesn't care about employees that much. I haven't receivedafair raise in3years."
ကုမ္ပဏီက၀န်ထမ်းတွေကိုဒီလောက်ဂရုမစိုက်ဘူး။ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ ငါ့ကိုကောင်းကောင်းလစာ တိုးမပေးဘူး။
"I don't know if it is my manager or this company, but I'm really getting sick of my job."
ငါ့မန်နေဂျာလား ကုမ္ပဏီလားတော့မသိဘူး။ အလုပ်ကိုငြီးငွေ့လာပြီ။
"What do you think about all the politics in this company?"
"The politics suck here. But it is the same for any large corporation. The best way to deal with it is to take advantage of the rules."
"I don't know how much longer I can take this job. I've been thinking about applying toadifferent company."
ဒီအလုပ်မှာဘယ်လောက်ဆက်မြဲမလဲတော့မသိဘူး။ တခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လျှောက်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။
"Have you ever thought about leaving this company?"
"What company do you want to switch to?"
"I started applying for other jobs. There arealot of positions open."
"I've been looking for jobs on monster.com. They havealot of positions available."
monster.com မှာအလုပ်ရှာနေတယ်။ အဲဒီမှာ အလုပ်နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
*office politics သည်ကုမ္ပဏီအတွင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ရာထူးအာဏာရရန် အုပ်စုဖွဲ့ခြေရှုပ်ကြခြင်း မျိုးဖြစ်သည်။
အချို့သောနိုင်ငံများတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတစ်ခုပြောင်းလုပ်ခြင်းကိုမလိုလားကြချေ။ ကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခုတွင် အလုပ်ကောင်းတစ်ခုရပါကမြဲမြံစွာလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်တော့ အလုပ်ပြောင်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီပြောင်းခြင်းသည်မထူးဆန်းပါ။ ထိုအကြောင်းအရာသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပြောဆိုစရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Permalink Reply by Soe Soe on January 19, 2014 at 10:06